I Josafata no mpanjakan’ny foko roan’ny Israely. Niara-belona tamin’i Ahaba Mpanjaka sy Jezebela avy amin’ny fanjakan’ny foko folo tany avaratra izy. Mpanjaka tsara anefa i Josafata, ary mpanjaka tsara koa i Asa rainy. Koa nifaly tamin’ny fiainana tsara ny vahoaka tao amin’ny fanjakan’ny foko roa tany atsimo nandritra ny taona maro.
Natahotra anefa izao ny olona. Hoy ny iraka tamin’i Josafata: ‘Misy tafika lehibe avy any Moaba sy Amona ary ny Tendrombohitra Seira, avy hamely anao.’ Israelita maro no nivory tao Jerosalema mba hangataka ny fanampian’i Jehovah. Nankao amin’ny tempoly izy, ary nivavaka i Josafata tao: ‘Ry Jehovah Andriamanitray ô, tsy fantatray izay hataonay. Tsy misy afaka mamonjy anay avy amin’izao tafika lehibe izao. Mangataka ny fanampianao izahay.’
Ny ampitso maraina dia hoy i Josafata tamin’ny vahoaka: ‘Matokia an’i Jehovah!’ Nametraka mpihira izy ho eny alohan’ny miaramila, ary avy eo raha teny am-pandehanana ireo dia nihira fiderana ho an’i Jehovah. Fantatrao ve izay nitranga rehefa nanakaiky ny ady izy? Nataon’i Jehovah izay hifamelezan’ny miaramila fahavalo. Ary rehefa tonga ny Israelita, dia efa maty avokoa ny miaramila fahavalo rehetra.
1 Mpanjaka 22:41-54; 2 Tantara 20:1-30.
Hizara Hizara Nitoky Tamin’i Jehovah i Josafata
my tant. 67